Toetr’andro: hanoram-baratra any atsimon’ny Nosy | NewsMada
Toetr’andro: hanoram-baratra any atsimon’ny Nosy
Tsy marin-toerana ny atmosfera any amin’ny faritra atsimo ka hikisaka any ny orana, ato ho ato. Hihalefy ihany koa ny tanjaky ny alizay. Araka izany, hanoram-baratra any Atsimon’ny Nosy izay hitohy anio tontolo. Hiitatra hahazo izany orana izany ny atitany atsimo, manomboka rahampitso alarobia, izany hoe ny any Matsiatra sy Ihorombe.
Mila miomana amin’ny fitondrana aro orana ary miaro ny fitaovana tsy ho lena ireo mpanala fanadinana BEPC tsy maintsy mivoaka ny trano. Torak’izany ireo mpiasa ary indrindra ireo mikasa ny hiala sasatra any atsimon’ny Nosy.
Hihena kosa ny rotsak’orana ary ho maina kokoa ny andro manomboka ny tolakandro vokatry ny fahalefahan’ny alizay.
Hiakatra tsikelikely ny maripana ambony, hatramin’ny faran’ny herinandro. Hisy fidinany izany any Atsimo andrefana ato anatin’ny roa andro noho ny oram-baratra any an-toerana. Tsy hisy fiovana firy ny maripana ambany. Manodidina ny 11°C ka hatramin’ny 22°C ny ambany ary eo anelanelan’ny 23°C hatramin’ny 35°C ny maripana ambony.